Ady amin’ny fandoroana ala Hangataka fiaraha-miasa amin’ny minisitera hafa ny minisiteran’ny tontolo iainana
Fihibohana lavareny Nihena ireo mpanjifa labiera
Lalàna mifehy ny banky Mila politika mifanaraka amin` ny sehatra iraisam-pirenena
LFR 2020 Hafana ny adihevitra anio !
Fanampiana ny sehatra tsy miankina Tsy azo oharina amin’ny any ivelany ny eto…
Nanambara ny Minisitry ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola, Richard Randriamandrato fa tsy ho vitan’ny fitondram-panjakana mihitsy ny hanome famatsiam-bola betsaka ny sehatra tsy miankina tahaka ny zava-misy any ivelany indrindra ny any amin’ireo tany manankarena.
Fampiasana ny tetibola momba ny fahasalamana Hanazava ny sekretera jeneralin’ny ministera
Handrasana rahampitso 2 jolay izany ny sekretera jeneralin’ny ministeran’ny fahasalamam-bahoaka, ny Profesora Gaetan Duval Solofomanana, hanazava ny tsara ho fantatra rehetra momban’ny tolo-dalana mikasika ny tetibola nasiam-panitsiana na PLFR 2020.
Fiahiana ny sehatry ny fiantohana Mitaky fanaraha-maso hentitra
Ny alatsinainy maraina 29 jona teo no nandaniana ny volavolan-dalàna lah. faha 007/2019 tamin’ny 30 oktobra mikasika ny fiantohana (Loi sur les Assurances).
Tsy maintsy jerena ny vokatra voalohany nametrahana ny politika faoben’ny fambolen-kazo, hoy ny minisitry ny tontolo iainana, Baomihavotse Vahinala Raharinirina.
Misy ny traikefa sy lesona azo alaina tamin’ny vita momba izay tamin’ny taon-dasa. Tsapa fa tsy maintsy manao fambolen-kazo mampandray anjara ny eny ifotony isika. Ampidinina any amin’ny distrika sy kaominina ary fokontany mihitsy izany, hoy hatrany ny fanazavany. Misy fomba maro azo hambolen-kazo. Eo ireo tamin’ny alalan’ny fiaramanidina fa eo koa ny olombelona. Eo ny resaka “Drone” na voangorivy, izay hojerena avokoa ny taham-pahombiazan’ireny. Ny fiaraha-mientan’ny herivelona rehetra, izay isaorana, na orinasa io na fikambanana, no antok’ireny fahombiazana ireny, hoy hatrany izy. Lojika raha nipetraka ny ahiahin’ny teknisianina mikasika ilay voa nafafy tamin’ny fiaramanidina satria izay no maha traikefa voalohany azy. Aorian’ny tombana no hahafahana mijery hoe hotohizana sa tsia ny fampiasana fiaramanidina. Herim-po very maina ny fambolen-kazo, raha tsy misy fanaraha-maso, ary hiverenana hanentanana ilay herivelona voalaza teo. Tany Boeny izahay tamin’ity herinandro ity ary nahita aloha fa naniry ny 90%-n’ireo hazo nambolena tany. Hapetraka ny ady amin’ny fandoroana ala ary hangatahako fiaraha-miasa amin’ireo minisitera hafa sy mpitandro filaminana, hoy izy. Mikasika ny andro maneran-tany fiarovana ny fiainana ara-javaboary nankalazaina omaly moa dia nampita hafatra ny minisitra fa notahian-janahary i Madagasikara satria ny 90%-n’ny biby sy ny zava-manan’aina eto, ohatra, dia tsy fahita maneran-tany. Tombontsoam-pirenena satria misarika mpizahatany izany. Misy fiantraikany lehibe amin’ny toekarena fa mandray anjara be dia be amin’ny fiainantsika andavanandro koa ireny satria mbola mahatonga antsika hanana rano fisotro sy toerana azo hambolena ireny biby sy ala ireny ka adidintsika ny miaro izany, hoy izy.